Dhibicda Aeroflot SSJ ee Moscow: ugu yaraan 41 dhintay (videos) - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • aan caadi ahayn »Dhibaatada Aeroflot SSJ ee Moscow: ugu yaraan 41 dhintay (videos)
Dhibaatada Aeroflot SSJ ee Moscow: ugu yaraan 41 dhintay (videos)
Eliseo Emma Kamgang 6 May 2019
Un Superjet 100 ka socda shirkadda Aeroflotqabashada a deg deg deg ah à Moscow Dab-damis, oo sababay geerida ugu yaraan 41 78 dadka saarnaa guddiga.
SSJ100-95 ee gawaadhida qaran ee Ruushka fuliya Duulimaadka SU1492 ayaa laga saaray 4 May 2019 Moscow-ku suganyahay garoonka diyaaradaha Murmansk, laakiin waxay si deg deg ah u waydiisatay deg deg deg deg ah bilowgiisii ​​ka dib markii ay soo muuqatay koronto la'aan. Fiidiyeyaasha shilku waxay u muuqdaan inay muujinayaan hal-halis cigta ka dib markii ugu horeysay ee taabashada, ka dibna guntinta dhulka ayaa hoos u dhacdey oo sida muuqata u qarxay taangiyada, mashiinnada dabaysha. Diyaaraduhu waxay ugu dambeyntii u yimaadeen inay joojiyaan ka dib markii muddo dheer socotay, rakaab badan oo ka baxsanaya bogagga hore iyo dab-bakhtiiyeyaasha ugu dambeyntii dab-deminta dabka ka dib daqiiqado 45.
Warbixinta ugu horreysa waxay sheegaysaa in Dadka 41 ayaa dilay shilkii ku dhacay Rakaabka 73 iyo shan ka tirsan shaqaalaha Gudaha, mid ka mid ah saddexda shaqaalaha ee Aeroflot ayaa u muuqda kuwa dhibanayaasha ah. Shirkadda diyaaradaha ayaa sheegtay in dadkii badbaadada ahaa laga daadgureeyay ilaalada 55 by shaqaale " iyagoo samaynaya wax kasta oo suurtagal ah si loo badbaadiyo rakaabka "Captain Denis Evdokimov waa" ugu dambeyntii ka baxa diyaaradda ". Dhamaan dadka rakaabka ah ee ku nool 33 waxay ku magacaabaan magacyo Ruush ah sida ku qoran liiska ay daabacday Aeroflot habeenimadii axadda, oo ay ku jiraan shan isbitaal.
Fariinta dhibaatada ee ay bixiyeen duuliyayaasha ayaa la sheegay inay raaceen a fashilaadda korontada taasoo keentay warka xili hore oo ay sameeyeen shil uu ku dhuftey wax yar ka dib kaddib. Waqtigaa aad ayay u adagtahay si loo sharaxo adkeynta saameynta SSJ100.
a baadhitaan dembi "ku xadgudub xeerarka amniga" ayaa la furay iyada oo la tixraacayo warbixinta Guddiga Baarista Ruushka, oo mas'uul ka ah baaritaanka shilalka hawada. Aeroflot ayaa isla markiiba dhisay a unugyada qalalaasaha oo uu madax ka ahaa agaasimaha maamulka Vitaly Saveliev. Qoyska dhibanayaasha ayaa si naxariis leh u qaadaya magaalada Moscow, ayay tiri. Duulimaadyo darsin ah ayaa la joojiyay shalay iyo lix subaxnimadii Isniinta, duulimaadyo badan oo dib u dhac ku yimid shirkadda Ruushka.
SSJ100-95, MSN95135 waxay diiwaan gashaneyd RA-89098, waxay samaysay duulimaadkii koowaad ee June 2017 ; Dayactirkii ugu dambeeyey ayaa la qabtey bilowgii bishii Abriil, isla markaana shilkii axadii ayaa la socday saddex duulimaad oo aan wax dhibaato ah la kulmin maalintii.
Superjet ayaa ku lug lahaa afar dhacdo ilaa taariikhda ah oo ay ku jiraan hal dhimasho, oo ah diyaarad dibadbax ah oo Indonesia lagu sameeyay oo lagu sameeyay 45 May May 2012; baadhitaanku wuxuu u sabab ahaa shilka khaladaadka aadanaha.
United Kingdom: ninkii furay Tunnel Channel waa pro-Brexit